Entry Point Forex Tusiyaha - Forex Muujiyeyaasha Download
Home MT4 Muujiyeyaasha Entry Point Forex Tusiyaha
Entry Point Forex Tusiyaha
Entry Point Forex Tusiyaha waxaa bixiyey forexentrypoint.org. Waa ay fududahay ah, tilmaame smart oo aadan ka xumaan doonaan in ay isticmaalaan. Laakiin waxaad u baahan doontaa in ay bartaan sida ay u shaqayso iyo sida loo fasiro signal ku siinayaa.
tilmaame waxaa soo bandhigay shaxda hoos ku gaar ah shaxda ugu weyn ee ganacsiga. Si ka duwan tilmaamayaasha kale oo badan, waxba on shaxda ganacsiga ah waxay ku tusaysaa. Ka dib markii loading tilmaame ee qariirada ganacsiga ah, aad u leedahay in la beddelo midabada khadadka kala duwan si ay u yihiin la arki karo tan iyo markii ay qaar ka mid ah iyaga ka mid ah waxaa la siiyaa midabka lahayn. calaamadaha ganacsiga la siiyo by khadadka kala duwan oo midba midka kale gudbaya. Sidaa darteed, weyddiin doonaa ganacsade ah in ay aad u wanaagsan qof aqoon u leh tilmaanta si uu samayn kartaa go'aanka saxda ah.
lagugu tuday sawirka.1. Muujinaya Entry Forex ee Point indicatorinserted shaxda ganacsiga ah.
From shaxda kor ku xusan, midabada line ee tilmaanta waa la beddelaa. Marka aad ka bedelanayso midabada, waxaad isticmaali kartaa midab kasta oo ay shardi tahay in uu yahay mid ka mid ah in adiga kugu habboon.
tilmaame wuxuu ka kooban yahay shan line, Si kastaba ha ahaatee line of qiimaha 3 iyo qiimaha 4 ma aha kuwo la arki karo on wakhti hoose; ay u noqdaan kuwo la arki karo marka la isticmaalayo waqti go'an oo kor H4. Sidaas marka la isticmaalayo wakhti yar ka badan H4, aad doonaa oo kaliya la isticmaalayo saddex line kuwaas oo qiimaha 1, qiimaha 2 iyo qiimaha 5. Sida laga soo xigtay midabada loo isticmaalo on shaxda kor ku xusan, line ee qiimaha 1 waa maroon midabka, in kasta oo qiime leh 2 waa midabka buluuga ah halka in ka qiima 5 Waa jaalaha ah ee midabka.
Haddii aad qaadato aragti dhaw at shaxda, waxaad arki doontaa arrin aad u xiiso badan, halkaas oo khadka kasta oo kale oo ka gudbaan at tusaale ahaan la mid ah inta badan u leh wakhtiyada. Laakiin waxaa jira qaar ka mid ah dhawr jeer oo kale markii saddex line oo dhan ha kasta oo kale oo aan ka gudbaan waqti isku mid ah oo hal dhibic.
Waa caado wanaagsan in la isticmaalo tilmaame la tilmaamayaasha kale haddii aad bilaabayso Forex ah si aad u awoodaan si loo sameeyo fasiraad sax ah u noqon doonaa. tilmaame ayaa sidoo kale u baahan tahay qaar ka mid ah aqoon dheeraad ah falanqaynta farsamo ee labada ciyaaryahan lacagta in aad tahay oo kaliya in ay ganacsi.
Saarid ganacsiga marka la isticmaalayo Tilmaame Forex Entry Point oo keliya.
FIIRO GAAR AH: this waxaa lagula talinayaa oo keliya in ganacsatada kuwaas oo si fiican u fahamsan yahay suuqa Forex ee. Haddii aan u isticmaali tilmaamahan lala tilmaame kale sida dhibic pivot FXI ama wax kale oo aad doorato gaar ahaan ka mid ah in abuuraa fallaadho sida calaamadaha.
The calaamadaha tilmaame Forex Entry Point yihiin isgoyska of khadadka. line ugu muhiimsan in la raadiyo waa line of qiimaha 5 (qiimaha line la soo bandhigay marka aad khadka farta la dulqabo). Marka line helo hoos oo dhan khadadka kale waa in aad meel si iibiyay a. Marka line ee qiimaha 5 gudbaan line iyo helo on top of khadadka oo dhan, meel si iibsan a.
Sidoo kale waxaa wanaagsan in la ogaado in signalka waa ugu sax ah marka khadadka gudbaan oo dhan at hal dhibic ka mid ah. Sidoo kale ka dib u geliya amarka, loo hubiyo in aad sidoo kale meel khasaaro stop ah iyo faa'iido qaadataan a. khasaare stop The waa in 10 Liiska Forbes. faa'iido ka qaaddid oo waxay ku xirnaan doontaa in aad diirada u faa'iido set iyo falanqaynta farsamo ee labada ciyaaryahan lacagta aad.
Tusaale marka in meel Xirfado.
Entry Point Forex Tusiyaha waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda wxbarashada.
Entry Point Forex Tusiyaha siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo Entry Point Forex Indicator.mq4?
Copy Entry Point Forex Indicator.mq4 in Directory Metatrader aad / khubaro / tilmaamayaasha /
Tusiyaha Entry Point Forex Indicator.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee Xagga Metatrader saar Entry Point Forex Indicator.mq4 4 Chart?
article PreviousTudor Girl Forex Tusiyaha
Next articleFxPro Forex Tusiyaha